सार्है दुःखद खबर : परदेशको सडकमै अस्तायो नेपाली चेलीको सपना, बहिनीको श,व बोकेर फर्किए दाजु र दिदी…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
सार्है दुःखद खबर : परदेशको सडकमै अस्तायो नेपाली चेलीको सपना, बहिनीको श,व बोकेर फर्किए दाजु र दिदी…हेर्नुहोस् ।
कुवेत : झापा मेचीनगर–२, भृकुटीकी २७ वर्षीया प्रज्ञा प्रधानको कुवेतमा भएको सवारी दु,र्घटनामा मृ’त्यु भएको छ। अक्टोबर ९ तारिखका दिन प्रधान चढेको सवारीसाधनलाई अर्को सवारीसाधनले ठबक्कर दिँदा दु,र्घटना भएको हो।
कुवेतको आदान अस्पतालमा उपचारका लागि पु¥र्‍याइए पनि शनिबार बिहान उनको मृ’त्यु भएको थियो। प्रधानको श’वलाई अक्टोबर १५ तारिखका दिन नेपाल पठाइएको छ। जनसम्पर्क समिति कुवेतका महामन्त्री कृष्ण पौडेलका अनुसार अक्टोबर गत शुक्रबार राति ड्यूटीबाट फर्किने क्रममा प्रधान चढेको
कम्पनीको सवारी सधनलाई अर्को सवारीसाधनले ठ,क्कर दिएको थियो। उनलाई अस्पताल पु¥र्‍याई शल्यक्रिया गरिए पनि अत्यधिक र,क्तश्रावका कारण शनिबार बिहान मृ,त घोषित गरिएको थियो।
पौडेलले मृ,तक प्रधान र उनकी दिदी रीता माया प्रधान कामबाट फर्किँदै गर्दा दु,र्घटनामा परेको बताए। बाटोमा उनीहरू चढेको कम्पनीको कारलाई अर्को कारले ठ,क्कर दिएको र दुवै जनालाई आदान अस्पताल लगिएको थियो। प्रज्ञाको अप’रेशन गरिए पनि बचाउन सकिएन।
दु,र्घटनामा रीता सामान्य घा’इते भएकी थिइन्। प्रज्ञाको शव दिदी रीता र कुवेतमै कार्यरत दाजु बालकुमार प्रधानले नेपाल लिएर गएको छन्। नेपाली राजदूताबास कुवेतका द्वितीय सचिव श्रीकृष्ण सिलवालले राहदानी नम्बर १०८०८७६५ भएकी प्रज्ञाको मृ’त्युको कारण सवारी दु,र्घटना रहेको बताए। इ न्युज बाट
Prevअनौठो बच्चाको जन्म : जसका ३१ वटा औला छन्…हेर्नुहोस् ।
Nextसास फेर्न गा’ह्रो हुने समस्या सामधान गर्ने यस्ता छन् घरेलु उपायहरु…हेर्नुहोस ।
महात्मा गान्धीको जन्मजयन्तीको अवसरमा भारतद्वारा नेपाललाई ४१ एम्बुलेन्स र ६ बस उपहार प्रदान…हेर्नुहोस् ।
हार्दिक बधाई ! बेलायतमा नेपाली इन्जिनियर सेलिना राईले ‘इन्टरनेसनल इमर्जिङ इन्जिनियर अवार्ड’ पाइन…हेर्नुहोस् ।
झापामा टि–२० क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुने !
संसदमा प्रदीप ज्ञवाली: पुनःस्थापित संसदले सुरुवातमै राम्रो संकेत देखाएन